Shiinaha Cunnooyinka ugu Fiican Cagaarka Qorshaha Cuntada miiska loo dhigo iyo alaabada hadiyadaha soo saareyaasha iyo alaableyda | FUXINGYE
Naqshadeynta miiska miisaska guga ee caanka ah ee ugu caansan iyo waxyaabaha hadiyadaha ah
Ururintaani waa naqshadeena cusub, ee Ubaxa Guga waa cunsur caan ah sanadkaan. Waxaan u adeegsanaa cashada oo aan kaliya u aheyn cuntada sidoo kale qurxin karta gurigaaga. Isku-dhafkan ayaa sidoo kale caan ka ah adduunka.
Tani waa qalab tayo sare leh oo lagu rakibay Ubaxa Guga taxanaha wuxuu sameyn karaa saxan, qaxwo, koob, shaah, koob iyo soos, baaquli saladh ah, saanwij saxan iyo keeg istaaga iyo wixii la mid ah, hadaad jeceshahay qaabkan laakiin badeecad ka duwan, fadlan xor u noqo inaad nala soo xiriirto si aad u hesho.
Waxyaabaha: shiinaha lafta cusub / shiinaha lafta fiican
10.5inch saxan casho qaab wareegsan ah
Cabbirka: Dia 26.7 * H3.7cm
8inch saxan qaab qaab wareeg ah
Cabbirka: Dia 20.2 * H3cm
8inch saxan qaab qaab wareegsan
Cabbirka: Dia 20.2 * H5cm
220cc koob qaab toosan & suugo
Koob: Dia8.7 * H5.7cm
Baadiye: Dia16 * H1.8cm
90cc koob qaab toosan & soor
Cabbirka Koobka: Dia5.6 * H6.7cm
Baadiye: Dia12.8 * H2cm
Cabbirka: Dia9 * H10.5cm
Waxaan raadineynay meelo fog fog si aan u sameyno ururintaan quruxda badan. astaamaha iyo quruxda buuxda ee ubaxyadan ay keeneen ayaa ka dhigi doonta dhammaan bilowga sheekaysigaaga cajiibka ah. Ka sokow inuu yahay mid la yaab leh, dhammaan qalabka cuntada ee ubaxyada ah sidoo kale waa kuwo aad u shaqeynaya oo waaraya sidoo kale!
Waan ognahay in soo bandhigidu ay muhiim tahay, qaasatan markay tahay xafladaha cashada iyo waxyaabaha dheriga laga hadlayo. Qalabkayaga cashada ayaa ka dhigaya mid cajiib ah oo aad hubto inaad ku amaanayso! Haddii aad ku raaxeysato dareenka casriga ah iyo kan casriga ah ama qaabka dabiiciga ah ee aad u doorto, waxaad dooraneysaa martidaada ayaa ka baqi doonta markaad u adeegto saxankaaga.
Cuntada la diyaariyey, waxaan caadi ahaan isku darnaa hoos.
24pcs casho dhigay
6pcs 10.5inch saxan qado
6pcs saxan salad 8inch ah
6pcs saxan macmacaan
20pcs casho dhigay
4pcs 10.5inch saxan qado
4pcs 8inch saxan salad ah
4pcs saxan macmacaan
4pcs 220cc koob + 4pcs sooska
18pcs casho dhigay
sidoo kale waxaad isku dari kartaa shay kasta oo aad rabto oo aad ka dooran karto waxyaabaha: dhoobada, shiinaha lafaha cusub ama shiinaha lafta wanaagsan. waa mid jilicsan oo adiga kugu tiirsan.
Waxaa lagugula talinayaa DISHWASHER, MICROWAVE AND OVEN, Way fududahay in la nadiifiyo. Dhammaan miisaska miiska waxaa lagu soo saaraa iyadoo la adeegsanayo oo keliya qalabka bey'ada u habboon. Gabi ahaanba waa u badbaado caafimaadka oo ugu habboon isticmaalka maalin kasta.
waa hadiyad weyn oo laga fiirsaday dhalashada asxaabta, Kirismaska, Maalinta Thanksgiving iyo maalmo kale oo xusuus mudan. Waxay aad ula dhacsan doonaan himilooyinkaaga runta ah iyo fikradaha wanaagsan.
Xirxirida: sanduuqa buniga ah ama sanduuqa midabka, Galbeedka Yurub, Bariga Yurub, Turkiga, Bariga Dhexe, Australasia, Waqooyiga Ameerika, Bartamaha / Koonfurta Ameerika
Qaabka mushaar-bixinta:L / C, T / T
Hore: Cunto caan ah oo casho ah iyo waxyaabo hadiyadeed
Xiga: Taxanaha beerta dalka